ဘေးအခန်းက လင်မယား စုံတွဲကို ချောင်းကြည့်မိတဲ့ လူ ပျို ကြီး ရဲ့ အဖြစ်… – Shwe Yaung Media
ဘေးအခန်းက လင်မယား စုံတွဲကို ချောင်းကြည့်မိတဲ့ လူ ပျို ကြီး ရဲ့ အဖြစ်…
ဘေးအခန်းကလင်မယားစကားပြောသံကိုနားမထောင်ချင်လည်းကြားနေရသည်…။ “မိန်းမ မင်းကုန်းပေးရမဲ့အလှည့်”“ဟာ..ဒီမှာ အရမ်းအိပ်ချင်နေတာကို“အိပ်ချင်တာ..အသာထား..ထပြီးကုန်းပေးစမ်းပါကွာ..” “သြော်..မနက်ကလည်းကျမကုန်းပေးပြီးပြီ..ခုလည်းကျမပဲ..ကုန်းပေးရဦးမှာလား..”“အေးလေမင်းပဲကုန်းပေးရမှာပေါ့..”
”ချိုးချိုးချွတ်ချွတ်အသံများကြားနေရသည်…။ ရုပ်လေးပါမြင်ရရင်ပိုပီး အရသာရှိမည်- မထူးဘူး လူ့လက်တစ်ရပ်သာသာ အုတ်နံရံကို တောက်တက်လိုတွယ်ကပ်တက်ပီး အပေါ်စီးကချောင်းမည့်အကြံဖြင့် …။ လွယ်တော့မလွယ် အင်မတန်မက်မောလွန်းလို့သာ ကုတ်ကပ်တက်ရသည်…
ပြုတ်ကျလျှင် မသာပေါ်နိုင်သည်..။အနည်းဆုံးတော့ ကျိုးပဲ့သွားနိုင်သည်။ တွေဝေနေစဉ်မှာပင် ” မိန်းမ မနက်ကလိုအရည်လည်းမထွက်ဘူး” ” ယွကျား တစ်နေတယ်” မထူးပါဘူးကွာ ခုံတေဆင့်နေရင် ကောင်းခန်းတွေလွတ်တော့မယ် …. ကိုယ်ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ စပိုက်ဒါမန်း ဇာတ်ကားထဲကအတိုင်း အုတ်နံရံကို အသကုန်ကုတ်ကပ်ကာ တက်ပီးကြည့်လိုက်မိသည်။
မြင်ကွင်းက မယုံနိုင်စရာ သောက်ကျိုးနဲ ဟားးးးး “သားလေး..မေမေ့ဆီလာ…မေမေ အီအီး ကုန်းပေးမယ်..”တဲ့. (သေပီ ဆာ ခဲလေသမျှသဲရေကျရပီ၊ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ သတိလွှတ်သွားတဲ့အခိုက် အုန်းးးး ဝုန်းးးး ”အောင်မင်းးး တေပါပီဂျ” နာကျင်စွာ အတွင်းကြေ တိုးတိတ်ကြေးကွဲ ဝမ်းနည်းပက်လက် ဖြင့် တီးတိုးငြီးတွားမိပါသည်။
အော် တကယ်ဟတ်ထိတဲ့ သီချင်းတွေပဲ ဖာ့ခ် လခွမ်းတောင် ယောကျ်ားမယူဘူးး အဲ မိန်းမ မယူဘူးးးးပြုံးနိုင်ကြပါစေ ..ပြုံးရယ်ခြင်းဖြင့် ဘဝအမောတွေပြေကြပါစေ…။
ကင်ဆာကုန်သည်တွေရဲ့ ဝိသမလောဘနဲ့ ကွမ်းကြိုက်သူတွေ အားရပါးရ စားနေကြတဲ့ ကွမ်းသီးအန္တရာယ်
ကိုယ်ပိုင် စစ်လက်နက်ကြီးတွေ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းက MTT Production